बिचित्र खबर>>झापामा अंकले भतिजी भ’गाएर लगेपछि…. – Sandesh Munch
बिचित्र खबर>>झापामा अंकले भतिजी भ’गाएर लगेपछि….
June 30, 2020 161
झापा । मानिसहरु कति अ’विवेकी बन्दै गएका छन् । संस्कार, धर्म मुल्य मान्यता सबै गु’म्दै गएको छ । यो एउटा उदाहरण पस्किदा हामीलाई पनि निकै नराम्रो लागेको छ । झापामा एक पुरुषले छोरी नाता पर्ने युवतीलाई भ’गाएर लगेका छन् । आफ्नो श्रीमतीको दिदीको छोरीलाई लिएर हिडेका छन् । हरिमाया राई जो चौधरीको छोरी हुन् । उनका श्रीमानले एक साता अघि आफ्नै दिदीको छोरी लिएर हिँडेका छन् । उनले श्रीमान र छोरी हिडेपछि एक साता देखि उनीहरुको खोजी गरिहेकी छन् ।
उनलाई पहिले नै छिमेकीले पनि उनीहरुका बारेमा हरिमायालाई नभनेका भने होइनन् । तर आफ्नै छोरीले यस्तो बे’इमानी गर्छ होला भन्ने कल्पना पनि गरिनन् । उनले त्यो छोरीलाई आफ्नै दुध खुवाएर हुर्काएकी थिइन् । त्यो छोरीको वुवाको नि’धन भएपछि उनले आफुले नै छोरीलाई पाल्दै आएकी थिइन् । बुवा न’भएको छोरी हो, अंकलसंग बुवाको माया सा’ट्दै होली भन्ने आफुले सोचेको बताएकी छन् । उनले छोरी लिएर हिडेका श्रीमानलाई खो’जीका लागि प्रहरीमा उ’जुरी पनि दिएकी छन् । उनले आफ्नै छोरी सरह मानेर श्रीमानसंगै गो’ठाला पठाउने गर्थिन ।
उनीहरु गोठालोमा जाँदा काँस घारीमा उनीहरु जिस्किदै गरेको छिमेकीले देखेपछि आएर आफुलाई आएर कुरा लगाए । उनले भनिन्, अरुका कुरा सुनेर आफ्नै छोरीलाई न’राम्रो सोच्नु पनि भएन । त्यही पनि छोरीलाई के कुरा हो भनेर सोधें, उनले भनिन् छोरीले पाथिभरा माता देखि सबै भगवानको क’सम खा’एर होइन भनेर भनी । त्यसपछि मैले दिदीसंग कुरा गरेर गाउँलेले त्यसै भनेका रहेछन् त्यस्तो केही हो’इनछ भनेर कुरा गरेँ ।
अहिले पनि आफुलाई छोरीले पनि धो’का दिएको बताइन् । उनकी दिदीको दलित युवकसंग वि’वाह भएको थियो । उनले पनि राईसंग विवाह गरेकी हुन् । अ’न्तरजातिय वि’वाह गरेकी उनी अहिले श्रीमानले आफ्नै छोरी लिएर हिडेपछि अलपत्र परेको बताएकी छन् । नयाँ घर बनाउन भनेर भएको घर पनि भत्काइएको छ । घर असरल्ल छ । श्रीमान पनि छैनन् । उनको पानी ओतलाग्ने र घाम छेक्ने छानो पनि छैन ।
एकातिर घर छैन अर्कोतिर श्रीमान पनि आफ्नै छोरी लिएर हिँडेपछि अहिले आफ्नो बि’चल्ली भएको बताइन् । उनले छोरीलाई ललाई फकाइ गरेर लगेको छ भने पनि छोरीको न्यायको लागि लाग्ने बताएकी छन् । पहिला उनी घर आउनु पर्यो अनि कुरा के हो त्यस पछि मात्र के गर्ने भन्ने सोचौला । उनले श्रीमानलाई मा’फी भने दिन नसक्ने बताइन् । १५ वर्षको विवाह गरेकी उनको अहिले आफ्नै पनि एक छोरी छन् ।
Prevहेर्नुहोस असार १६ गते मंगलबार जुन ३० तारीखको राशिफल, श्रीगणेशले सबैको कल्याण गरुन
Nextब्रेकिङ्ग >जारी लकडाउन साउन ७ गतेसम्म थप गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय
साइकल चोरेरै भक्तपुरमा तीन तले घर, यिनको चोर्ने तरिका देखेर प्रहरी पनि चकित !
को#रोनाबाट वीरगञ्जमा थप दुई जनाको मृ#त्यु
एउटा इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! सम्पर्क गर्नुहोला।
सबैभन्दा कन्जुस यी राशिका मानिस हुन्छन्, तपाईको कुन राशि ?